Fromgbọ njem site na Istanbul gaa Kocaeli | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulGbọ njem site na Kocaeli ruo Istanbul ga-adị mfe
29 / 09 / 2019 34 Istanbul, 41 Kocaeli, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
iga njem site na istanbul ka ikwado
Obodo Kocaeli na-aga n’ihu imezu nnukwu ọrụ iji nye ezigbo ụgbọ njem dị mma ma dị mma n’ọtụtụ ebe nke obodo ahụ. Zọ a rụrụ ọhụrụ na-eme ka ọpụpụ na-aga n'ihu ma na-eme ka ụmụ amaala nọrọ n'ọnọdụ ọzọ dị ka ụzọ njem ọzọ. N'ebe a, ụzọ njikọ connectionayırova ga-ejikọ ya na Istanbul. Zọ njikọ dị n’etiti Tuzla Şifa Quarter na Çayırova ga-adị mfe ma ga-eme njem n’etiti mpaghara abụọ a. N'ime oru ngo a, a na-eme ndozi ala nke okporo ụzọ njikọ mmiri na ọrụ ikpokọta.
AKW ROKWỌ ROB CONR CON ND CON NA-AKNTA
Ọmarịcha ala na arụ ọrụ na-agwụ ike na-arụ ọrụ na Tuzla nke njikọ njikọ nke ga-eme ka mma na njem gaa Istanbul ma mee ka netwọsị nwee njem. Mgbe emechara nhazi ala na nkụ ike gwụrụ, ndị otu nke Ngalaba Sayensị Ọrụ ga-amalite ịrụ mgbidi nke ụwa nke ụzọ njikọ ahụ. Ndị otu na-aka nke ọzọ na njikọ okporo ụzọ mmiri ahụ dị na mmiri Çayırova mmiri na mmiri akara mmiri arụchara.
BANRAN ANBANRILL AHILL GHARA
Nsogbu ụgbọ njem dị n'etiti Şifa Quarter na Çayırova, nke na-enweghị njikọ Şekerpınarị njikọ E-80, ga-ewepụ ekele maka ụzọ njikọ. Ndị bi na Şifa bi na canekerpınar njikọ nke Çiftlik Street ga-enweta ohere dị mfe na provideay easyrova mgbe emechara oru a.
NTỤKWU NDỊ A GA-ABỤ
Site n'iji ọrụ ahụ rụọ ọrụ, E-80 ga-ejikọta na njem na-asọ ma ọwụwa anyanwụ-n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ugwu-n'ebe ndịda. Ala akwa na ijikọta okporo ụzọ ndị a ga-ewu n'akụkụ ebe ndịda nke ogige gwongworo na mpaghara ga-ejikọta mpaghara abụọ ahụ. N'ime oru ngo ahụ, a na-ewu 1 91 na 7 mita na mita mita mita 90 mita na ogologo mita 11.
11 NTỤTỤ 725 TONE ASPHALT SERIES
N'ime oru ngo a, usoro 2 puku 500 mita ga-emezu. N'ime ọmụmụ ihe ahụ, 4 puku 615 cubic mita nke ihe, 675 tọn ígwè, puku 429 mita mmiri ikuku mmiri mmiri, 597 mita na-aṅụ mmiri mmiri ga-eme. A ga-arụpụta batrị 852 maka afara. A ga-etinye okporo ụzọ na 5 puku 600 square mita nke parquet, 10 puku 150 mita nkwụsị. A ga-eji 11 puku kilogram 725 mee ihe n 'ụzọ.
Ịnweta Mersin Port ga-adị mfe karịa akara TCDD
Dilovası ga-adị mfe ịnweta site n'aka West Junction
Ụgbọ njem na Dilovası West Junction
Ụgbọ njem na Tuzla-Çayırova
Ụgbọ njem n'etiti Tuzla na Cayirova
Inweta Dilovasi si Eynerce Junction
Uzo ohuru si Kocaeli rue Istanbul
Ationgbọ njem Park na 12 District na Mahadum Kocaeli…
Istanbul-Kocaeli na-echekwa njem a na-egbochighị
Ụzọ Njikọ Şekerpınar
ụzọ njikọ njikọ
Fromgbọ njem site na Istanbul gaa Istanbul
Ndị Ntorobịa Isi Obodo Nwere Iwu fficmụta Iwu Okporo ụzọ